13 / 07 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: 13-ka July, 2018
Gaadiidka Dadweynaha 15 Bilaashka Luuliyo ee Adana
Dawladda Hoose ee Adana Magaalo-weyn, 15 July Martyrs Xusuus-qor, Dimuqraadiyadda iyo Hawlaha Maalinta Midnimada Qaranka ayaa la qaban doonaa si loo fududeeyo gaadiidka muwaadiniinta ee loo tago Bartamaha Park Park oo la soo gaba-gabeeyay. Dawlada Hoose ee Adana Magaalo-Weyne, 15 Luulyo Martyrs Xusuus, Demoqraadiyad [More ...]
Kantaroolka Gaadiidka Dadweynaha ee Gazipaşa
Kooxda Baadhitaanka Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Gazipaşa si loo hubiyo in muwaadiniintu ka faa'iidaystaan ​​adeegga gaadiid tayo leh ayaa had iyo jeer la kormeeraa Nidaamka dembiga waxaa lagu dabaqayaa kuwa aan furin qaboojiyaha. Qorshaynta Gaadiidka Dawlada Hoose ee Antalya iyo [More ...]
15 ee Antalya gaadiidka bilaash ah July
Dowladda Hoose ee Antalya, 15 Luulyo Dimuqraadiyadda iyo Maalinta Midnimada Qaranka 15-16 gaadiidka dadweynaha ayaa xor noqon doona bisha Luulyo lagu dhawaaqo. Waaxda Qorsheynta Gaadiidka Dawlada Hoose iyo Nidaamka Tareenka, 15 Luulyo Dimuqraadiyadda [More ...]
Madaxweyne Altay, Sehit Ömer Halisdemir Daraasada Baaritaanka Wadada
Duqa Magaalada Konya ee caasimada Ugur Ibrahim Altay, Meram iyo degmada Seljuk ayaa isku xiri doona midba midka kale wuxuu baarey shaqada Martyr Martmer Halisdemir Street. 15 Sanad-guurada Luulyo, magaca halyeeyga sida Martyr Ömer Halisdemir [More ...]
TCDD 5 Sameynta wadooyinka lugta ee wadooyinka kala duwan ee gobolka
TCDD 5. 2018 / 303283 GCC qiimaha xadka 4.592.575,42 TL oo ka mid ah Agaasinka Guud ee Tareenka Gobolka (TCDD) [More ...]
BURULAŞ Waxay sii wadaa Tababbarka Caafimaadka iyo Badbaadada Shaqada
BURULAŞ waxay sii wadaa tababbaro caafimaad iyo badbaado shaqo oo loogu talagalay shaqaalaha ka shaqeeya xarunta. Tababarada ay bixiyeen dhakhaatiirta goobta shaqada iyo khabiirada amniga shaqada ee hoos imaada iskuduwaha kormeeraha tababarka, [More ...]
TCDD KPSS 2017 / 2 Natiijooyinka Meelmarinta la cusbooneysiiyay
Gaadiidka ku yaalla İzmir, ayaa ku dhuftay doonta doon, Tram Expeditions
Darawalka Van ayaa ku dhuftay mid kamid ah geedaha diyaaradda Gazi Boulevard wuxuuna sababay in geedku furmo. Maanta oo ah 09.30, geedka sycamore, oo qatar ugu jira inuu baabi'iyo natiijada dhacdadii ka dhacday marinka badda, [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka Turhan oo Mashquulinaysa Mashruucyada
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, ayaa sheegay in olarak mega mashaariicda acak la dardargelin doono maadaama ay wasaaraddu u fududeyn doonto nolosha dadka ee gaadiidka iyo isgaarsiinta. Waxaan si adag uga shaqeyn doonnaa haddii loo baahdo waxaanna ku ridi doonnaa mashruucyadeena wax u qabashada dadkeenna. [More ...]
Mashruuca FTSO wuxuu si hufan ula socdaa Mashruuca Baabuurta Cable-ka ah
Iyadoo ay la socdaan maamulayaasha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Fethiye, Kırtur Ltd.Şti. Maamulayaasha iyo kooxda farsamada ee shirkada ayaa kulmay si ay uga wada hadlaan xaalada mashruucii ugu dambeeyay. Maamulayaasha shirkadaha, [More ...]
Kumanaan Qaadasho Heerka Isgoyska
Ilaalada isgoysyada ee ka shaqeeya iskuxirka tareenka ee dhex maraya laba goobood oo kala duwan Torbalı ayaa badbaadiyay daraasiin nolosha ilaa iyo hadda ilaalada heerarka kala goosha ee ka shaqeeya shabakada tareenka ee gudbaya laba meelood oo kala duwan Torbalı ilaa iyo hadda [More ...]
Waad ku mahadsan tahay Madaxweynaha
Dariiqa khadka safarka Torbalı min 2 illaa 3 ayaa la kordhiyay. 51 kama tagi doonto jidadka iyo wadooyinka magaalada Dolmuş Torbalı. Dhaawaca Torbalı ee magaalada soo galay wuxuu noqday talaabo lagu nasto gaadiidka. Duqa Magaalada [More ...]
Maalgashiga UPS ilaa Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul
hawlaha hawada dalka Turkiga, ayaa ku dhawaaqay markii dhameystirtay noqon doonaan garoonka diyaaradaha ee dunida ugu weyn ballaarin doonto baal si Airport New Istanbul. Xarunta cusub, UPS ee Cologne, Germany iyada oo macaamiisha ay European in xarun hawada transcontinental Turkey dhabarka ee adduunka ee [More ...]
RayHaber 13.07.2018 Warbixinta Shirka
Nidaamyada Duullimaadyada ayaa la Dhisi Doonaa Doolarka Dooxada ayaa la iibsan doonaa